NgewatchOS 3 uMickey noMinnie basixelele ixesha ngomlomo | Ndisuka mac
NgewatchOS 3 uMickey noMinnie basixelele ixesha ngomlomo
Uninzi lwenu sele nilwazi ukuba uhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza ye-Apple Watch, i-watchOS 3, yongeze utshintsho oluninzi kwaye enye yazo lolukhetho olusivumelayo yiva ilizwi likaMickey noMinnie (kuxhomekeke kwimbonakalo yokubukela esiyisebenzisayo) lisithi ixesha langoku. Le yinto esele sixoxe ngayo kwiwebhu malunga neenyanga ezintathu ezidlulileyo kwaye kubonakala kufanelekile ukuyikhumbula ukuze bonke abo babukele iApple ngenguqulelo yamvanje ekhoyo bayisebenzise.
Umsebenzi ulula ukuwenza kwaye ukuze basixelele ixesha ngokuvakalayo, konke okufuneka ukwenze kukucofa kwi-watchface okanye ucofe xa sikhethe ukubukela, ngamanye amaxesha bakhupha nokuhleka okuncinci, okuhle kakhulu emva kokuxelela ixesha. Ayisiyonto esishiya nemilomo yethu ivulekile kude nayo, kodwa yinkcaza encinci esiqinisekile ukuba uninzi lwenu luya kuyithanda kwaye ngakumbi ukuba ninabantwana ekhaya.
Ingxaki kuphela kukuba incinci yendlu ayiyeki ukukucela ukuba ubavumele bacofe iwotshi ukuze UMickey okanye uMinnie ukuxelela ixesha. Ngokubanzi, kulungile nangona iyinkcukacha encinci engafaki ibhonasi kwiwotshi, kude nayo, kodwa ilungile kumaxesha athile nakwabahlobo kunye nabantu ababaziyo ukuba bababeke ebusweni xa besiva kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » NgewatchOS 3 uMickey noMinnie basixelele ixesha ngomlomo
Isixa esitsha sezicelo zeMac ngaphezulu nje kwe- $ 10
IWarhammer 40.000: Ukuqala kweMfazwe yesibini iyafumaneka kwi-Mac ngoLwesine olandelayo